Semalt Analytics: Innovation Uye Digital Transformation Munyika yeNyika yeBusiness yanhasi
Kudhindwa kweDhijidhi (inozivikanwawo kuti kupesana kana kushandiswa kwebhizimisi) inorevakuchinja kwebhizimisi uye mararamiro avo ekushanda kwekombiji kana sarudzo yekugadzirisa zvakare inosangana nekuchinja.Dhijitori shanduko inokosha kune marudzi ose emabhizimisi kana ibhizinesi duku, iri pakati kana guru. Nokudaro, kukanganiswa kunogona kuvavakapupurira mune zvechiremba, zvekutengesa, software, logistics kana kunyange kutengesa nzvimbo. Kushandiswa kwezvinhu zvitsva mubhizinesi ndicho chinhu chinokosha pakupa achiitiko chikuru chebhizimisi chebhizimisi kuvashandi vose nevatengi.
Lisa Mitchell, Mutungamiriri weKuteresi Achibudirira Semalt ,inopa ruzivo pamusoro pekuti matsva anoshandura sei nyika yebhizimisi nhasi.
Nzira yakanakisisa yekuramba iri mberi mumakwikwi munyika yemazuva ano inofanirwa kuvakukwanisa kuburitsa maitiro ekugadziriswa pamabhizimisi nyore. Mutungamiri wekushandurwa kwemajeri kunobva pakuvandudzamutengi wezviitiko uye kuderedza mari yekushanda. Zvisinei, kudhindwa kwemajeri kunopfuura kuwedzera teknolojia itsva. Izvo zvakarepamusoro pekugadzira tsika.
Misangano inofanira kutaurira mabhizimisi anoshingaira, kuchinja kwebhizimisimamiriro okunze nekugadzira nzira dzemazuva ano. IT (Information Technology) mapoka uye vatungamiri mune chero bhizimisi rinofanira kushanda pamwechete mukufambakunotungamira mukuenderera mberi, kuendesa innovation uye kusangana nebhizimisi zvinodiwa. Chaizvoizvo, izvo zvinoshandura dhigiriji-pasimari, kukurumidza kuita mabasa ebhizimisi, inounza kuchinja kwakanaka mukukwanisa maitiro, vanhu uye maitiro nekuvandudza nguva yekutsvaga.
Zvikonzero zvinokosha zvinokonzera kushandurwa kwebhizimisi kusanganisira misika yekuda, mutengimufambiro, unyanzvi hwokugadzira zvinhu uyewo zvakatipoteredza. Unyanzvi hwemagetsi hunotungamirira kumagetsi ekugadzirwa kwebhizimisi.Bhizimusi logistics inofanira kutora teknolojia yepamusoro segore, RAD, IOT nedzimwe nhepfenyuro uye inotsauka kubva kune dzimwe nyika..Uyezve,zvigadzirwa zvemagetsi zvinogamuchirwa zvakanyanya musangano. Vanowedzera kukurumidza, vanounza migumisiro yakawanda yakawanda, inodhura mariuye kuunza kukosha mubasa.
Maitiro evatengi ndeimwewo chinhu chinokosha mukushandurwa kwedhijiti.Ndezvipi zvinotarisirwa nevatengi uye zvavanoda kubva kune sangano (uye zvigadzirwa zvezvigadzirwa zvemagetsi pakusangana kwezvinoda zvebhizimisi)? Vatengi vanodakuvandudzwa kwekodzero dzekodzero dzakabatanidzwa pamwe nekukumbira kwekusununguka kwekushandiswa. Munyaya iyi, mabhizinesi anofanira kutarisana nekunze zvinhu zvakadarosekuchinja mararamiro, bhizinesi mudikanwi, zvinowanikwa mumakwikwi nemitemo yekutonga. Mutengi anoda uye unyanzvi hwekombiyutamukuchengetedza zvido zvinenge zvakakosha zvakasiyana. Semuenzaniso, kudhura kwebhadharo nekuvandudzwa kwezvakanaka ndezvimwe zviitiko zviviri zvakajeka.Uyezve, Forrester Consulting Research yakagadzirwa neAccenture Interactive, yakagadzirisa chinetso chekushanda kwebhizimisisekugutsikana kwevatengi, yakawedzera kukurumidza kwemazano uye kubatsirwa.
Kubudirira kunokanganisa kushanduka kunoenderana nesangano remazuva anotsika uye kukura kwe digital. Aya mashoko anotsanangurwa pasi apa:
Mutengi anoda. Vatengi vanotarisira kuwana ruzivo rwakanaka mune zvosedelivery feature. Nokudaro, ita kuti sangano rako riwane kuvimbika kwevatengi uye vatengi vanogara vachitaura nezvechirongwa.
Kuronga nzira. Kubatsira kwevashandi uye kushandura kugadzirisa zvinyorwaDhiyabhorosi-kuita zvisarudzo zvekuita saka zvichiita kuti hurumende ishandise pachena uye kushanda kukuru.
Business innovation. Digitizing mabhizimisi aripo kana ma digital digitalmishonga, iyo inopfuura kudarika zvinowanikwa mune zvebhizimisi zvinoda kushandura zvigadzirwa zvebhizimisi uye inosimudzira mazano matsva emitambo uye michina.
Mukupedzisa, kuchinja kwedhidhiyo ndiko kuchinja kwechokwadi kunokonzera dutumuhutano hwepasi. Izvo zvinokonzerwa nekushanda kwebhizimisi zvinoratidzirwa kwete chete mumabasa asiwo mumatunhu ose e sanganouye makambani emakambani. CIOs nevatungamiri vebhizimisi vari kuwedzera kuti vaone kuti innovation pamwe nebhizimusi shanduko ndeyekutyaira bhizinesi, kuunza kukosha uye kuunza kuchinja kunobudirira Source .